Minamato Yekusimudzira Hupfumi | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Minamato Yekusimudzira Hupfumi
Minamato Yekusimudzira Hupfumi
Nhasi tichave tiri kubata neminamato yekusimudzira hupfumi.
VaFiripi 4:19; "Uye Mwari wangu achazadzisa zvese zvamunoda maererano nepfuma yake mukubwinya muna Kristu Jesu."
Psa. 145: 1-3 “Ndichakukudzai zvikuru, Mwari wangu, imwi mambo; Ndicharumbidza zita renyu nokusingaperi-peri. Ndichakurumbidzai mazuva ose; Ndicharumbidza zita renyu nokusingaperi-peri. Jehovha mukuru, anofanira kurumbidzwa kwazvo; ukuru hwake hahunganzverwi. ”
Chinhu chakanaka kupa kutenda kuna Mwari uye kuratidza Mutsa wake mazuva ese, pakati pazvo zvese, Mwari anga akatendeka kwatiri. Chokwadi, Iye akatendeka kune zvese zvaakavimbisa uye nerudo kune zvese zvaAkaita. Meso evose anotarisa kwauri uye iwe unovapa chikafu chavo panguva yakakodzera.
Sezvo tingave tichinamatira kusimukira kwehupfumi nhasi, tinofanirwa kunzwisisa kuti minamato inogona kutibatsira kubva kune mamwe matanho ekusagadzikana muhupenyu hwedu hwehukama nekubatana nekutenda kuvimba kwedu naMwari sosi yedu yezvipo zvese nerubatsiro.
Isu tinoona kukura, kuwedzera kufambira mberi uye budiriro munyika dzakasiyana siyana, mune zvakawanda sekuda kwatinoita kuti zvione zvichiitika munyika medu, tinofanira kuzviisa mumaoko aIshe. Tinoisa moyo yevatungamiriri vedu mumaoko aIshe. Isu tinonamatira Moyo weTsitsi nerudo. Mhedzisiro yeizvi ndeyekuti ivo vanotanga kuita zvinhu izvo zvinoratidza kuti ivo vanofunga uye vanoda Mwari.
Kana munhu achida Mwari achida muvakidzani wake, pane mamwe matanho aaisazotora pane kuti atsvage nzira idzo hupenyu hweavo vakamukomberedza huchave nani. Mat. 22:39, "Wechipiri wakafanana nawo, Ida wokwako sezvaunozvida iwe." Naijeriya inyika yakaropafadzwa nezviwanikwa zvakakwana kuti zviite hupfumi, kurwisa nzara, hurombo uye kuwedzera hupfumi asi kana paine varume ndivo vatungamiriri vemasimba vanongonetsekana nekushandura mari yeruzhinji kuakavanzika maakaundi, pasina mubvunzo, mukaha uripakati pevazhinji uye iyo yepamusoro kirasi yaizove pachena. Psa. 62:10, "Usavimba nekudzvinyirira, uye usazvibira pakupamba: kana pfuma ikawanda, usaisa mwoyo wako pairi."
Kana paine shanduko, kana moyo yevanhu ichiuya kuchiedza cherudo rwaMwari, pane nhanho dzinoenda murume kuratidza kuti ane hanya nevamwe. Management yezve zviwanikwa, marongero achaitwa kuitira kubatsira ruzhinji uye gwanza riri pakati pevazhinji vepamusoro nevazhinji richave bridged. Ndosaka tingave tichinamatira vatungamiriri vedu, veveruzhinji nevezvikamu zvakazvimirira, varidzi vemabhizinesi uye vashandirwi vevashandi. Isu tinotora chinzvimbo panzvimbo yemunamato kuti tione mhedzisiro yebudiriro uye shanduko mune hupfumi hwedu uye saka zvichave zvakadaro.
VaFiripi 4: 6; "Musafunganya pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, asi pazvinhu zvese nekunyengetera nekuteterera, pamwe nekutenda, zvikumbiro zvenyu ngazviziviswe kuna Mwari."
Baba muzita raJesu, ndinokutendai nerudo rwenyu pamusoro pedu, nekuti munogara muri isu nguva dzose, padivi pedu, nekutendeka kwenyu kunogara kuzvizvarwa zvese, netsitsi dzenyu dzatinoona zuva nezuva muzita raJesu.
VaRoma 8:31; "Kana Mwari ari kwatiri, ndiani angatirwisa?"
Mwari Wamasimbaose tinoti tinokutendai nekuti munogara muchitichengeta nekutiriritira, ndinokutendai nekuve makatiriritira muzita raJesu.
Psa. Nekuti mucharopafadza akarurama; muchamukomberedza nenyasha senhovo.
Baba vedu tinokutendai zvakare zvakare nekuti hamuna kumbotirasisa kunyangwe munguva dzakaoma, makamira nesu mukatipa zvatinoda, zita renyu ngarikudzwe zvakanyanya muzita raJesu.
Tenzi tinoisa vatungamiriri vedu mumaoko enyu, tinonamata kuti muvape moyo wetsitsi ungazotungamira mukuita sarudzo dzine budiriro uye kusimudzira hupfumi hwedu muzita raJesu.
Tenzi tinonamatira huchenjeri hwevarume nevakadzi mune zvinzvimbo zvemasimba, tinonamata kuti muvape Mweya weUchenjeri Kunzwisisa uye Zano, tinonamata kuti muvabatsire kutibuditsa mumatambudziko ezveupfumi, aripo kana ari kuuya muzita ra Jesu.
Tenzi tinonamata kuti mutibatsire tese kukudzai isu nezvatinazvo nemuzita raJesu Kristu.
Zvir. 3: 9-10, ”Kudza Jehovha nezvaunazvo, uye nezvitsva zvazvose zvawakawana; Saka matura ako achazadzwa nezvakawanda, Makate ako achapfachuka newaini itsva.”
Baba Tenzi tinonamata kuti isu titange kusangana nemitemo ingadai iri mukuda kwedu inotungamira mukukura kukuru kwehupfumi nemuzita raJesu Kristu.
Tinokumbira kuti mweya wese wemakaro, kusafunga uye kuzvida mumoyo mevanhu vane masimba zvife, tinonamata kuti vatange kuona rudo vuratidze nezviwanikwa zviri mumaoko avo muzita raJesu.
1Tim. 6:10, ”Kuda mari ndiwo mudzi wezvakaipa zvese, vamwe vachichiva, vakatsauka kubva parutendo, vakazvibaya neshungu zhinji.
Baba Tenzi tinokumbira kuti mutipe mikana mitsva nenzizi nyowani dzemari dzekuwedzera hupfumi muzita raJesu.
Baba Tenzi tinonamatira vanamuzvinabhizimusi vedu, vashandirwi nevanoisa mari, tinonamatira kuwedzera kukuru pamwe nemari zhinji muzita raJesu.
Isu tinonamatira kune vese varidzi vebhizinesi kuti nyasha dzako dzigotikomba senge takabviswa muzita raJesu Kristu.
Tinonamata kuti ruoko rwenyu rune simba ruzorore pane vashandirwi vevashandi, kune vanoita mari nevaridzi vemabhizinesi muzita raJesu
Tinonamata maropafadzo aMwari pazvikamu zveveruzhinji uye zvakazvimirira zvehupfumi hwedu muzita raJesu Kristu.
Tinonamatira kukura kwebhizimisi mumigwagwa yedu, mumadhorobha edu nematunhu nokudaro zvichitungamira mukukura kwehupfumi hwedu muzita raJesu Kristu.
Tinonamata kuti rubatsiro rwako ruwanikwe kune wese munhu ari kunetseka, tsoka dzavo dzakasimbiswa uye vanowana kuwanda muzita raJesu Kristu.
Isu tinopesana nekurasikirwa nedambudziko mumabasa edu muzita raJesu Kristu.
Tinouya kuzopesana nezvimisikidzo zvehupfumi, nzara nehurombo kumatunhu edu muzita raJesu Kristu.
Baba Tenzi tinonamata kuti mutibatsire kubva mukusagadzikana kuenda mukukura nekufambira mberi muchishandisa nzira dzakakodzera nemaitiro nehuchenjeri hwaMwari muzita raJesu Kristu.
Baba Vekudenga tinonamata kuti mutibatsire kuvimba nemi pahuchenjeri hungatibatsire kuita sarudzo dzakatendeka nemitemo, yevatungamiriri vedu, vatengesi, vashandirwi vevashandi nokudaro zvichitungamira mukuvandudza hupfumi hwedu muzita raJesu.
Baba tinokutendai nekuti zvese zvatiinazvo, takagamuchira kubva kwamuri, takaisa ruvimbo rwedu mamuri, tinokutendai nekusimudzira hupfumi, tinokutendai nekuwedzera, ndinokutendai nemazano ekugadzira hupfumi muzita raJesu.
Baba tinokutendai pamunhu wese, maita nekuwanda kwatinogashira muzita raJesu Kristu.
Previous nyayaMinyengetero Yekurwisa Hondo Munyika
inoteveraMunamato Pfungwa Kune Vanotambura
15 Tinamato une simba Pamusoro peBherizebhuri
Kuparadzira Vatariri veNzvimbo Yako Yeminamato Yekunonoka
Kunamata Points Kuti Uzive Mukana
30 Mharidzo dzeMunyengetero Unobudirira